Sahayda Warshada Shiinaha ee HPMC isticmaalka dhismaha iyo soo saaraha |Longou
Sahayda warshadaynta isticmaalka dhismaha ee HPMC
1. MODCELL Hydroxypropyl Methyl Cellulose(HPMC), waa ethers cellulose aan-ionic ahayn oo laga soo saaro unugyo dabiici ah oo sarreeya (suuf la safeeyey) cellulose iyada oo loo marayo falcelin kiimikaad oo taxane ah.Waxay ku milmi kartaa biyaha saami kasta, ugu badnaantooda, feejignaantooda waxay kuxirantahay viscositykooda.
2. Waxay leeyihiin sifooyin sida milanka biyaha, hantida ilaalinta biyaha, nooca aan-ionic, qiimaha PH deggan, dhaqdhaqaaqa dusha sare, reversibility ee xalinta gelling heerkulka kala duwan, dhumucdiisuna, simentation film-samaynta, sifaynta hantida, caaryada-iska caabinta iyo iwm.
3. Dhammaan sifooyinkaas, waxaa si weyn loogu isticmaalaa habka dhumucdi, jeexista, xasilinta joojinta, iyo xaaladaha biyo-haynta.
1. MODCELL Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC), waa ethers cellulose aan-ionic ah oo laga soo saaro unugyo dabiici ah oo sarreeya (suuf la safeeyey) cellulose iyada oo loo marayo fal-celin kiimikaad taxane ah.Waxay ku milmi kartaa biyaha saami kasta, ugu badnaantooda, feejignaantooda waxay kuxirantahay viscositykooda.
4. Waxay leedahay waxyaabo aan caadi ahayn oo qiimo leh oo isku dhafan jireed iyo kiimiko, marka loo eego farqiga beddelka heerka beddelka kooxda iyo shahaadada la beddelay.
5. Ka dib marka dusha sare ee daloolku ay nuugaan qoyaanka, waxay ilaalin kartaa qoyaanka;
Soo saaraha dhismaha HPMC wuxuu isticmaalaa 1
Muuqashada Budada cad
Cufnaanta weyn (g/cm3) 19.0--38
Maadada methyl(%) 19.0--24.0
Waxyaabaha Hydroypropyl (%) 4.0--12.0
Heerkulka xuubka (°C) 70--75
Waxyaabaha qoyaanka ah (%) ≤5.0
Hadhaaga (Ash) ≤5.0
HPMCalaabooyinka leh sifooyin la hagaajiyay, ayaa si weyn loogu isticmaalaa beeraha dhismaha sida dhoobada dhoobada dhoobada ah, is-beddelka sibidhka, hoobiye dahaarka, dhoobada dhoobada, qurxinta qurxinta, gypsum.
HPMC waa nooc ka mid ah budo caag ah oo loo isticmaali karo sida cuntada lagu daro, kala firdhiya, emulsifier, wakiilka hakinta, dhumuclaha, wax-buuxiyaha, buuxinta, xasiliyaha, dahaarka u adkaysta saliidda, iwm.
➢Waqti dheer oo furan
➢iska caabin simbiriirixan sare
➢Haysashada biyaha sare
➢Xoog ku dheggan oo ku filan
Hore: RDP AP2160 adag ee C1T C1TE C1F koollada dhoobada
Xiga: Soo saaraha heerka maalinlaha ah ee HPMC
Kiimikada dhismaha HPMC/MHPC
Sahayda warshadda ether cellulose
soo saaraha hpmc
Gudaha/ gidaarka dibadda putty hpmc/mhpc
Hydroxypropyl dambas hooseeya
gidaarka putty isticmaal hpmc
Hydorypropyl methyl cellulose HPMC LK400 heer sare ah ...
Alaabta Shiinaha ee Cellulose HEMC isticmaalka dhismaha ...
Hydroxyethyl methyl cellulose HEMC ee gypsum b...